ကောင်ကလေးက ကောင်မလေးကို ..(ကောင်မလေးတွေအတွက် မေးခွန်းလေးနော်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကောင်ကလေးက ကောင်မလေးကို ..(ကောင်မလေးတွေအတွက် မေးခွန်းလေးနော်)
ကောင်ကလေးက ကောင်မလေးကို ..(ကောင်မလေးတွေအတွက် မေးခွန်းလေးနော်)
Posted by moesatrain on Jul 7, 2010 in News |2comments
ကဲ . ဒီ topic လေးကတော့ မြန်မာချစ်သူ အဖွဲ့ ဝင် မိန်းကလေးများ ဖြေဖို့ အတွက်ပါ ။ တစ်နေ့ က ရဲလေး သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး ပြန်မေးရမဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းလည်း မရှိလေတော့ …. ဒီသူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ အားကိုးရတော့တာပေ့ါ ဗျာ … ။ ဟုတ်ဘူးလား …. ။
ခေါင်းစဉ်လေးမှာ ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ကောင်လေး တစ်ယောက် က ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောပြီဆိုပါတော့ … ။ အဲ့ဒါဆို အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမျိူး ခံစားနေရလဲ ဆိုတာ သိချင်တာပါ ။
ပျော်နေလား ဒါမှမဟုတ် စိတ်ညစ်နေတာလား … ။
ရင်ခုန်နေတာလား ….. ဒေါသထွက်နေတာလား … ။
အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေကို မေးကြည့်တာပါ .. ။ ဘယ်လိုမျိူးများ ခံစားနေရလဲလို့ …. ။ ပြီးတော့ တစ်လ စောင့်ပါဦး .. ။ စဉ်းစားပါရစေဦးတို့ ဆိုတာတွေကိုလည်း ဘာကြောင့် ပြောကြတာလဲ မသိဘူးနော်.. ။ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ကြိုက်ပြီဆိုတာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပါတဲ့ မသိစိတ်က အလိုလို သိနေပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ ဖွင့်ပြောပြီဆိုရင် ပြန်ဖြေဖို့ အဖြေ ရှိကို ရှိရမှာပါ ။ အဲ့ဒါကြောင့် စောင့်ပါဦး ဆိုတဲ့ စကား ကိုရော ဘာဖြစ်လို့ များ ပြောကြတာလဲ မသိဘူး နော်….. ။ အဲ့ဒါကို စဉ်းစားလို့ မရလို့ …. ။
မြန်မာချစ်သူက သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကို မေးလိုက်ပြီနော်… ။ ကျန်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိချင်နေကြတော့မယ် ..။ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ အတိုင်းလေးကို ဖြေပေးကြပါဦး …. ။
ကောင်ကလေးက ကောင်မလေးကို ရည်းစားလုပ်ဖို့ ခွင့်တောင်းရင်
ကောင်မလေး ရဲ့ စိတ်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်သွားလဲ
သူနဲ့ အဝေးကြီး ကျွန်တော်သိလည်း စိတ်ထဲရှိသလို ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်
သူက .. နောက်သုံးလေး ငါးလ ကြာရင် ထူးခြားမယ်တဲ့ ….. ရဲလေး သီချင်းလေးပါ ….. ။
ကြိုယ်မျှော်လင့်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့ပျော်မှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့အိုက်တင်ခံပြီးဘယ်လောက်စောင့်ပါဦး ဘာဦးတွေဘာတွေတော့ပြောမှာပေါ့။ ချက်ချင်းကြီးတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲ ။ မကြိုက်တဲ့လူက လိုက်ပြောရင်တော့ ပါးရိုက်ချင်ရိုက်မိမှာပေါ့ :D
dar ka taw…depends pop..ko kyate chit ya tae. thu so yin taw. wan thar mi mhar pop..chit tine lae..let khan lo. ya tr myo mha ma hote bae..character to. bar to. kyi ya ohn mhar pop..let me ask u ..before boy proposeagirl they take time already …why not they don’t want toagirl to take time for observe bac